Laamaha Amaanka oo baaraya sida gaariga qarxay ku galay Hotel Central – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Laamahaa Amaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya iney baaritaan ku hayaan sida uu gudaha Hotel Central ugu gudbay gaari isku qarxiyey masjidka hotelkaas, islamarkaana dilay ku dhawaad 20 ruux.
Qaasim Axmed Rooble oo ah afhayeenka Laamaha Amniga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in su’aalo la weydiinayo ilaaladii hotelkaas.
Wuxuu sheegay iney soo gudbin doonaan natiijada marka baaritaanku dhamaado. Hotelka qaraxu ka dhacay waxaa ku dhintay dad badan oo ay ku jiraan labo xildhibaan, waxaana ku dhaawacmay dad kale oo badan ay uu ka mid ahaa R/wasaare ku xigeen Maxamed Cumar Carte.
Gaariga qarxay ayaa ahaa mid la dhigay meel ku dhow Masjid ku dhex yaalla hotelka, waxaana sidoo kale ku xigay qof is qarxiyey.